Paul's Letter to the Colossians – 2trondro
Home / Baiboly / Epistily / Paul's Letter to the Colossians
1:1 Paul, Apostolin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra, ary Timoty, ny rahalahy iray,
1:2 mamangy ny olona masina sy ny rahalahy mahatoky ao amin'i Kristy Jesosy izay any Kolosia,.
1:3 Anie ny fahasoavana sy ny fiadanana ho anareo, avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra, ny Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika,, mivavaka ho anareo mandrakariva.
1:4 Fa efa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy, sy ny fitiavana izay anananao an'ny olona masina rehetra,
1:5 noho ny fanantenana izay efa voatahiry ho anareo any an-danitra, izay efa renareo ny alalan 'ny teny fahamarinana ao amin'ny Filazantsara.
1:6 Izany dia tonga anao, araka ny teo ihany ny izao tontolo izao, izay dia mitombo sy mitondra voa, tahaka ny efa natao tany aminareo koa, hatramin'ny andro voalohany rehefa nandre sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina,
1:7 araka nianaranao izany tamin'i Epafra, malala indrindra ny mpiara-mpanompo, izay ho anareo mpanompo mahatoky an'i Kristy Jesosy.
1:8 Ary efa naseho taminay koa ny fitiavanareo ao amin'ny Fanahy.
1:9 Avy eo, koa, hatramin'ny andro voalohany rehefa nandre izany, dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho feno fahalalana tsara ny sitrapony, amin'ny fahendrena sy ny fahazavan,
1:10 mba handehananareo mendrika an'Andriamanitra, satria ankasitrahana eo ny zava-drehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra,
1:11 nampaherezana isaky ny hatsaran-toetra, araka ny herin'ny voninahiny, amin'ny faharetana sy fahari-po, amin'ny fifaliana,
1:12 ka misaora Andriamanitra Ray, Izay efa nanao antsika ho mendrika handray anjara ao ny anjaran'ny olona masina, ao amin'ny mazava.
1:13 Fa efa namonjy antsika ho afaka amin'ny herin'ny maizina, Ary efa namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny Zanany malalany,
1:14 Izay ananantsika fanavotana amin'ny ràny, ny famelana ny fahotana.
1:15 Izy no endrik'ilay Andriamanitra tsy hita maso, ny voalohan-teraka zavatra ary rehetra izao.
1:16 Fa Izy no nisiam-nahary ny zava-drehetra any an-danitra sy ny eto an-tany, ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na dominations, na ny fanapahana, na fahefana. No nahariana ny zavatra rehetra izay ao aminy ary ao aminy.
1:17 Ary Izy no talohan'ny rehetra, ary ao aminy foana ny zavatra rehetra.
1:18 Ary Izy no Lohan'ny vatany, ny Fiangonana. Izy no voalohany, ny voalohan-teraka tamin'ny maty, ka amin'ny zavatra rehetra izy, mba hanao faratampony.
1:19 Fa ny Ray dia tsara-faly fa fahafenoana rehetra mitoetra ao aminy,
1:20 ary izay, alalany, ny zavatra rehetra izay hihavananao amin'ny tenany, manao fihavanana ny alalan 'ny ràny teo amin'ny hazo fijaliana, fa ny zavatra izay eto an-tany, ary koa ny zavatra izay any an-danitra.
1:21 Ary ianao, na dia efa, tamin'ny andro lasa, fantany ho vahiny sy fahavalo, amin'ny asan'ny ratsy,
1:22 fa ankehitriny kosa izy efa mihavana anao, tamin'ny vatana nofo, amin'ny fahafatesana, mba hanolotra anao, masina sy tsy manan-tsiny sy immaculate, eo anatrehany.
1:23 Koa dia, maharitra amin'ny finoana: marim-pototra sy maharitra sy mifototra tsara, amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo, izay efa no hitoriana ny zavaboary rehetra eny ambanin'ny lanitra, ny Filazantsaran'i izay, Paul, Lasa mpanompo.
1:24 Fa ankehitriny dia mifaly amin'ny fitiavany ny aminareo, ka hatoky tsara amin'izay ny nofoko ny zavatra izay tsy ampy amin'ny fijalian'i Kristy, noho ny vatany, dia ny Fiangonana.
1:25 Fa efa lasa fanompoam-pivavahana ny Fiangonana, araka ny fitondran'Andriamanitra, izay nomena ahy eo aminareo, mba hahazoako manatanteraka ny Tenin'Andriamanitra,
1:26 ny zava-miafina izay mbola miafina ny lasa taona sy taranaka, fa voaseho ankehitriny amin'ny olony masina.
1:27 Ho azy ireo, Andriamanitra sitrak'Andriamanitra ny Nampahafantatra ny haren'ny voninahitr'ity zava-niafina ity any amin'ny jentilisa, dia Kristy sy ny fanantenana ny voninahiny ao anatinareo.
1:28 Izahay manambara azy, fanitsiana ny olona rehetra sy ny fampianarana ny olona rehetra, amin'ny fahendrena rehetra, mba hanatitra ny olona rehetra tanteraka ao amin'i Kristy Jesosy.
1:29 Izy no, koa, I asa, iezahako fatratra araka ny zavatra ato anatiko, izay miasa amin'ny hatsaran-toetra.
2:1 Fa tiako ho fantatrareo ny karazana solicitude izay ananako ho anao, ary ho an 'ireo izay any Laodikia, ary koa ho an'ireo izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako amin'ny nofo.
2:2 Enga anie ny fony ho nampionona sy nampianarina fitiavana, rehetra ny haren'ny ny plenitude-tsaina, amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy.
2:3 Fa ao amin'ny tenany no miafina rehetra rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana.
2:4 Ankehitriny dia lazaiko izao, mba tsy hisy hamitaka anareo amin'ny teny Grandiose.
2:5 Fa na dia tsy manatrika anareo mety amin'ny vatana, nefa Izaho momba anareo ihany amin'ny fanahy. Ary mifaly toy ny faly mijery ny filaminanareo sy ny fototra, izay ao amin'i Kristy, ny finoanao.
2:6 Noho izany, araka ny efa nandray ny Tompo Jesoa Kristy, mandehana ao aminy.
2:7 Aoka mandrakariva mamaka tsara sy miorina mafy ao amin'i Kristy. Ary ho nihanahery finoana, tahaka ny efa nianatra azy io koa, Mitombo ao aminy amin'ny asa-pisaorana.
2:8 Tandremo sao tsy misy olona mamitaka anareo amin'ny alalan'ny filozofia sy ny lainga foana, izay hita ao amin'ny fomba amam-panao ny olona, araka ny fitaoman 'izao tontolo izao, fa tsy araka an'i Kristy.
2:9 Fa ao amin'ny tenany, rehetra ny fahafenoan'ny Masina no itoeran'ny Nature batana.
2:10 Ary ao aminy, efa feno; fa Izy no Lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra,.
2:11 Izy koa, ianao no voafora tamin'ny famorana tsy nataon-tanana, tsy noho ny fandrobana ny tenan'ny nofo, fa, dia tamin'ny famoran'i Kristy.
2:12 Efa nalevina taminy tamin'ny batisa. Izy koa, efa nitsangana indray noho ny finoana, noho ny asan'Andriamanitra, izay nanangana azy tamin'ny maty.
2:13 Ary rehefa matin'ny ny helokareo sy ny nofonareo tsy voafora ny, dia enlivened anao, miaraka aminy, mamela heloka anao ny fandikan-dalàna rehetra,
2:14 ary mikosoka hiala ny sora-tànan'ny didy izay ny hamely anay, izay mifanohitra amin antsika. Ary izy no naka izany hiala tsy ho eo aminareo, affixing izany tamin'ny hazo fijaliana.
2:15 Ary noho izany, fandrobana fanapahana sy ny fahefana, efa nitondra azy amim-pahatokiana sy miharihary, firavoravoan'ny ireo toy ny tenany.
2:16 Noho izany, aoka tsy hisy hitsara anareo toy ny sakafo na zava-pisotro ahiahy, na ny andro firavoravoana manokana, na ny andro firavoravoana amin'ny voaloham-bolana, na ny Sabata.
2:17 Fa ireo dia aloky ny hoavy, fa ny tenany dia an'i Kristy.
2:18 Aoka tsy hisy hamitaka anareo, tia kokoa ny iva razana sy ny fivavahana amin'ny anjely, mandeha araka ny zavatra tsy hitany, rehefa vainly inflated ny fihetseham nofony,
2:19 ka tsy mihazona ny lohany, izay ny tenany rehetra, amin'ny alalan'ny tonon-taolana sy ny hozatra antony, miray miaraka sy mitombo miaraka amin'ny vokatra izay avy amin'Andriamanitra.
2:20 Koa dia, raha-maty amin'i Kristy ny fitaoman 'izao tontolo izao, nahoana no mbola mandray fanapahan-kevitra toy ny hoe ianao no velona amin'izao tontolo izao?
2:21 Tsy azo kasihina, no tsy mba hanandrana, tsy mandray ireo zavatra ireo,
2:22 izay hitarika ho amin'ny fandringanana rehetra araka ny tena fampiasana, araka ny didy sy ny fampianaran'olona.
2:23 Manana hevitra toy izany, fara fahakeliny, ny fikasana mba ho tonga amin'ny fahendrena, fa noho ny finoanoam-poana sy ny debasement, tsy hiantra ny vatana, Ary izy ireo tsy misy voninahitra satiating ny nofo.
3:1 Noho izany, raha efa nitsangan-ko velona niaraka tamin'i Kristy, dia katsaho ny zavatra any ambony, any amin'ny itoeran'i Kristy, Izay mipetraka eo an-tànana ankavanan'Andriamanitra Andriamanitra.
3:2 Diniho ny zavatra any ambony, tsy ny zavatra etỳ an-tany.
3:3 Fa efa maty, ary toy izany koa ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra.
3:4 Rehefa Kristy, ny fiainanao, hita, dia ianareo koa no miseho aminy koa amin'ny voninahitra.
3:5 Noho izany, amonoanareo ny vatanao, raha mbola eo amin 'ny tany. Fa noho ny fijangajangana, fahalotoana, filan'ny, fanirian-dratsy, ary ny avarice, izay karazana fanompoana ho an'ny sampy,
3:6 ny fahatezeran'Andriamanitra no efa reraka ny zanaky ny tsy finoana.
3:7 Ianao, koa, nandeha tamin'ny izany, tamin'ny andro lasa, rehefa nonina teo aminy.
3:8 Fa ankehitriny, tsy maintsy manokana izany rehetra izany: fahatezerana, fahatezerana, lolompo, fitenenan-dratsy, ary mendrika teny avy ny vavanao.
3:9 Aza mifandainga. Lemak'i ny tenanareo ny toetra taloha, mbamin'ny asany,
3:10 ary Mitafia ny toetra vaovao, izay efa havaozina amin'ny fahalalana, araka ny endrik'Ilay namorona azy izay,
3:11 amin'izany dia tsy misy jentilisa na Jiosy, voafora na tsy voafora, Barbariana na Skytiana, mpanompo na tsy andevo. Fa tsy, Kristy no zavatra rehetra, amin'ny olona rehetra.
3:12 Noho izany, tafio tahaka ny olom-boafidy 'Andriamanitra: masina sy malala, amin'ny fo ny famindram-po, hatsaram-panahy, fanetren-tena, tena araka ny antonony, ary ny faharetana.
3:13 Support iray hafa, ary, raha misy manana hitarainana momba ny sasany, hifamela. Fa tahaka ny Tompo ny helokareo, toy izany koa no tsy maintsy ataonao.
3:14 Ary mihoatra noho izany rehetra izany dia manana fiantrana, fa fehin'ny fahatanterahana.
3:15 Ary aoka ny fiadanan'i Kristy asandrato ny fonareo. Fa in izany soa aman-tsara, ianao efa nantsoina, tahaka ny tena iray. Ary aoka ho feno fisaorana.
3:16 Aoka ny tenin'i Kristy velona ao anatinareo betsaka, amin'ny fahendrena rehetra, mampianatra sy manitsy ny hafa, amin'ny salamo, fihirana, sy ara-panahy tonon-kiran'i, mihira ho an'Andriamanitra amin'ny fahasoavana ao am-ponareo.
3:17 Aoka ny zava-drehetra na inona na inona fa manao, na amin'ny teny, na amin'ny atao, atao rehetra amin 'ny anaran' ny Tompo Jesoa Kristy, ka misaora Andriamanitra Ray amin'ny alalany.
3:18 vehivavy, hanaiky ny vadinareo, tahaka ny Ara-dalàna ao amin'ny Tompo.
3:19 lehilahy, tiava ny vadinareo, ary aza ho mangidy amin'ny azy.
3:20 Ankizy, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra. Fa izao no ankasitrahana ho an'i Jehovah.
3:21 ray, aza mampahatezitra ny zanakareo amin'ny fahatezerana, fandrao kivy.
3:22 mpanompo, manaiky, amin'ny zava-drehetra, ny mpanolo araka ny nofo, tsy manompo afa-tsy raha hita, toy ny hoe mba hampifaliana ny olona, fa ny fanompoana ao amin'ny fahatsoram-po, matahotra an'Andriamanitra.
3:23 Na inona na inona ataonao, manao izany amin'ny fo, tahaka ny ho an'ny Tompo, fa tsy ho an'ny lehilahy.
3:24 Fa fantatrareo fa ianareo dia hahazo avy amin'i Jehovah ny hamaly ny lova. Manompoa Kristy Tompo.
3:25 Fa na iza na iza mahatonga ny faharatrana dia havaly ny zavatra efa nataony drariny. Ary tsy misy tavan'olona amin'Andriamanitra.
4:1 ianareo tompo, hanefa izay mpanomponao ny zavatra ara-drariny marina sy, satria fantatrareo fa ianareo, koa, mba manana Tompo any an-danitra.
4:2 Miezaha mitady ny vavaka. Miambena amin'ny vavaka amin'ny asa fisaorana.
4:3 miara-mivavaka, ho antsika ihany koa, ka mba hamohan'Andriamanitra varavarana ho antsika-teny, mba milaza ny zava-niafina ny amin'i Kristy, (noho izany, izao ankehitriny izao ihany, Gadra aho)
4:4 ka dia afaka maneho izany aho araka ny fomba fa tsy mety raha miteny.
4:5 Mandehana amin'ny fahendrena ny any ivelany, fanavotana izao.
4:6 Aoka ny fiteninareo ho mandrakariva tsara tarehy, mamy sira, ka dia ho fantatrareo ny fomba tokony hamaly ny olona tsirairay.
4:7 Fa ny amin'ny zavatra izay mahakasika ahy, Tykiko, indrindra rahalahy malala sy mpanompo mahatoky ary namako mpanompo ao amin'ny Tompo, hanao ny zavatra rehetra nambarako taminareo.
4:8 Efa naniraka Azy ho aminareo izany zavatra izany indrindra tanjona, ka dia ho fantatrareo ny zavatra izay mahakasika anao, ary mety hampionona ny fonareo,
4:9 amin'ny Onesimosy, indrindra rahalahy malalako sy mahatoky, izay avy any aminareo. Izy roa lahy hampahafantatra anareo ny zavatra rehetra izay ho mitranga eto.
4:10 Aristarko, ny mpiara-mifatotra, veloma anareo, tahaka ny Marka, ny akaiky havan'i Barnabasy, momba izay efa nandray torolalana, (ka raha tonga atỳ aminareo, handray azy)
4:11 sy Jesosy, izay atao hoe Josto, ary izay avy amin'ny voafora. Ireo irery ihany no mpanampy, amin 'ny fanjakan' Andriamanitra; izy ireo no ho fampiononana ahy.
4:12 Manao veloma anao Epafra, izay avy any aminareo, mpanompon'i Kristy Jesosy, mandrakariva sy mieritreritra ho anareo amin'ny vavaka, mba hitsangana, marina, ka hatoky, manontolo ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra.
4:13 Fa manolotra fijoroana ho vavolombelona ho azy, fa efa niasa be dia be ho anao, ary ho an 'ireo izay any Laodikia, ary ho an 'ireo any Hierapolia.
4:14 Luke, dia tena malala, mpanao fanafody, veloma anareo, tahaka ny ataon'ny Demasy.
4:15 Manaova veloma ny rahalahy any Laodikia, ary Nymfa, ary ireo izay any an-tranony, fiangonana.
4:16 Ary raha ity epistily ity voavaky eo aminareo, hanao izay Vakio koa ao am-piangonana any Laodikia:, ary dia tokony hamaky izay avy any Laodikia:.
4:17 Ary lazao amin'i Arkipo: "Tandremo ny fanompoana izay noraisinao tao amin'ny Tompo, mba tanteraho tsara. "
4:18 Ny fiarahabana an'i Paoly ny tanako. Tsarovy ny gadra. Enga anie aminareo anie ny fahasoavana. Amen.